Kungani zemininingwane Eyodwa ephephile zezokuthutha | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kungani zemininingwane Eyodwa ephephile zezokuthutha
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/12/2020)
I polemic ku ukuqeqesha kuqhathaniswa ibhasi e-Europe isihloko never-ophela, wonke umuntu Lifanele umbono wabo siqu ku. kodwa, siyizilwane ngisho ukukhuluma mayelana nokuphepha, futhi uma sifuna - ingabe kwanele? Ukuphepha yezokuthutha yethu abakhethiwe kufanele ngaso sonke isikhathi zize kuqala, futhi siyakucela ekhuluma namuhla. ngokuvamile, abantu zivame ukulalela lesi sihloko ngendlela ehlukile, kuye abo okuthandwa wokujikeleza. Ngaphezu kwalokho, izindaba zakamuva sizwa izingozi emhlabeni isici izwe e, kanjalo. Nakuba uzoba bayaqabukela bezwe kwakukhona ukuphahlazeka isitimela endaweni ethile, kuyenzeka. Njengoba nje kwenzeka umoya, imoto, ibhasi kanye nezinye izindlela zokuhamba. Noma kunjalo, izibalo zicacile - ngokusemthethweni, isitimela ingenye izindlela nephephile yokuhamba kulezi zinsuku! Izinga efanayo ukuphepha iya air traffic ngenkathi zonke ezinye izindlela zokuthutha ukuza emva.
Ngabe isitimela Ngenye Yezindlela Eziphephe Kakhulu Zokuhamba Kuwo Wonke Amazwe?
Ayikho, akuyona. Akubona bonke komzila nezitimela bangabezwe izinga efanayo. Uma sikhuluma wesitimela ukuphepha travel, esivame ukukhuluma ngakho esimeningcondvo ezweni elithile. ngokuvamile, ujantshi travel iphephile kakhulu, kodwa namanje akusho ukulimaza ehlola isimo komzila wezwe lwenethiwekhi uma ufuna ukuhamba ngesitimela.
Ngokwesibonelo, iminyaka eyisikhombisa nje edlule U.S. abalwa 32,367 Abashona umgwaqo, 570 ujantshi Abashona, futhi 485 Abashona emoyeni. Lawa izinombolo nje anolaka, kodwa benza akuchaza kuthanda ukuba sobala okubonisa ukuthi isitimela travel kanye air travel kukhona kokubili kakhulu liphephe kakhulu travel umgwaqo.
Uma uzihambela Europe, hlola lezi isitimela amaqiniso isimanga.
Injani kancane Safe Esebenzisa Ezokuthutha?
Lokho kufanele kube isithuthuthu. Entela (hhayi ukuthi kukhona funny khona) odokotela ayenomkhuba ubheke izithuthuthu (okuyi, izingozi zibangelwa ugibele eyodwa) njengoba “donor imijikelezo.” ngokusobala, la izingozi ngokuvamile kaningi kangaka futhi ebulalayo ukuthi kuzala amaningi isitho abanikeli. Okuhambayo e ezinye izitimela esheshayo eYurophu akakubangeli izingozi eziningi.
Ngingabhekana Kanjani Qiniseka Train Ingabe Omunye Amamodi nephephile wezokuthutha Manje?
Nazi ezinye izizathu phezulu kungani isitimela ingenye izindlela nephephile yokuhamba:
Lapho bobabili kwezitimela nezitimela ngokwanele zinakekelwe (okuyi, njalo serviced, zigcinwe, indawo lapho kudingeka, njll), uzoba akuvami ukufakaza yimuphi izingozi nale kusho yezokuthutha. Esinye sezizathu wukuthi, ngokungafani zokuthutha umgwaqo, kukhona kuphela indlela futhi lokuvakasha izindlela (okuyi, isitimela) ezilandelayo omunye umzila oya endaweni oya zaso zokugcina. Ayikho izimoto ezingalindelekile ziyeza indlela yakho, okwenza ulahlekelwa ukulawula isondo. Azikho ukuqhela okungazelelwe kanye ematfuba, nezinye izimo ezibangela ukucindezeleka futhi yingozi. Lokhu kungaba esinye sezizathu esenza zokuthutha ngesitimela uye wahlala omunye tindlela nephephile yokuhamba kuze kube manje.
The Train Lowo ephephile zezokuthutha kanye Izinzuzo Environmental
Uma siqhathanisa wesitimela nge emgwaqweni kanye air zokuthutha, singavele sibonise kalula ukuthi iTimela Ngenye Yezindlela Eziphephe Kakhulu Zokuhamba kodwa futhi nokunye okuningi esimeme kunanoma iyiphi enye indlela yokuhamba. Kanjani? Izitimela musa ukukhiqiza njengoba abaningi CO2 kwekhabhoni, futhi isitimela kwekhabhoni kungukuthi ezikhishwe ngqo emkhathini. plus, izitimela musa kudle amandla kakhulu noma isikhala, kanye namazinga yabo umsindo zingaphansi kuka nezinye izindlela zokuhamba. Abagibeli abaningi abazi nge-eco bakhetha izitimela zabagibeli njengendlela yokuhamba abayithandayo. Abavakashi emhlabeni Europe, kakhulu, bathande eco-nobungane izitimela kanye nemibiko zabo ukuphepha.
Ngaphandle nje kokuthi izincwadi ezibhalwe ngenhla izinzuzo kwemvelo ukuthi kukhona, ngesikhathi esifanayo, izinzuzo zethu zezempilo, hhayi kuphela zemininingwane Lowo ephephile zezokuthutha kodwa ugibele izitimela zinhle kakhulu impilo yethu jikelele.
Ngokuphathelene izitimela lwabagibeli, bavumela labo abenza ukugibela kwabo ukuba:
Move emhlabeni inqola ukuhamba emaphasishi esikoleni isitimela ngenkathi ethutha. Lokhu kusiza mobile ukuhlala umzimba
Hamba phansi lapho beya emahhovisi abo noma amakhaya sebewushiyile esiteshini. Lena kakhulu Imizimba yabo
Cambalala usendleleni eya emsebenzini futhi ubuya emsebenzini ngaphandle kokufaka engozini yokungena ku- ingozi yemoto. Elibalulekile zokuvimbela nokuphepha
Jabulela imisebenzi yokuzilibazisa phakathi kwamaphoyinti A no-B. Indlela kumnandi ukuba uphumule futhi uthole ngokwakho aphume ucasukile
Kulezi zinsuku, lapho wonke umuntu esetshenzwa ngokweqile futhi bagxume besuka emazwini abo esihlalweni imoto esitulwini emsebenzini kanye noHezekeli, kokuba abanye isikhathi hlala phakathi kubalulekile. Ukuba ithuba lokuphumula esitimeleni njengoba esishintsha nakanjani omunye izizathu eziningi zokuthi kungani abantu bakhethe izitimela.
Ekhuluma izitimela elide, kunjalo kukho kumnandi ukuhamba njengoba ukuvumela isikhathi sokuphumula. Ukuthola ukusuka endaweni A kuya endaweni B e 2 amahora ngendiza ayasebenza, kodwa ingabe iphephile impilo yakho? Ingabe inselelo kokuthunyelwe kwebhulogi “Izincwajana zemininingwane Lowo ephephile zezokuthutha”? can yakho umzimba nengqondo ukucubungula kube noshintsho olusheshayo sezulu, ingcindezi yasemkhathini, nakho konke okunye phakathi? Lutho neze. Lena kungani ehamba ukuqeqesha emhlabeni Europe ukunika umzimba wakho ithuba ukujwayela izinguquko futhi ukucubungula kwabo ngendlela ngendlela enempilo.
Impahla (Ukuphepha) izinzuzo
Hhayi ngokunembile impilo noma ukuphepha inzuzo, kodwa umthwalo ukuphepha kudlala indima kuhle abalulekile kwabanye abagibeli. Kungakhathaliseki uma iphakethe ukukhanya ukuhamba noma cha, ofuna imithwalo yakho yinye. abahambi Iningi kukhona abaqoqi zobuciko eziyigugu, imifanekiso, amadokhumenti, njll. futhi bafuna izinkumbulo yabo nabo. Ngeshwa, air travel waziwa ngemithwalo elahlekile neyonakele okuyinto engavamile ukwenzeka lapho uhamba ngesitimela. plus, imithwalo yakho uhlale nawe, ngakho akekho ongazihlwitha nganoma isimangalo somthwalo. Ingabe lo isizathu ukuthi isitimela ingenye izindlela nephephile yokuhamba? Sicabanga kanjalo.
Izincwajana zemininingwane travel akuyona inkomishi wonke umuntu yetiye, kodwa nakanjani ingenye izinkomishi nephephile, futhi kakhulu ebukekayo abathandekayo, kakhulu. Ngokuzayo uma kukhona ukuhlela yakho yendawo iholide, cabanga ukuthi zemininingwane ingenye Yezindlela Eziphephe Kakhulu Zokuhamba, futhi unganqikazi ukunikeza isitimela ukuhamba ithuba. Kuyinto ukhululekile, kuphephile, kungcono super ebukekayo, futhi okuhlangenwe nakho uzoba ukukhumbula phakade. Uma uzihambela Europe, uxhumane nathi ku https://www.saveatrain.com ukubhuka ithikithi lakho ngemizuzu engaphansi kuka emithathu bese uqale ejabulela travel wakho uphephile ku-komzila!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-safest-transportation%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#Fashion ravel ezithambile #ephephile #safetravel #zokuthutha